Nnwom 8 - Akuapem Twi Contemporary Bible (AKCB)
1Awurade, yɛn Awurade,
wo din kɛseyɛ ada adi wiase mmaa nyinaa.
atimtim ɔsoro nohɔ,
2mmofra ne nkokoaa mpo de wɔn ano
kamfo wo, wʼatamfo nti;
na wode bɔ atamfo ne aweretɔfo ano.
3Sɛ mehwɛ wo ɔsorosoro,
wo nsateaa ano adwuma;
ɔsram ne nsoromma a
wode obiara asi nʼafa a,
4onipa ne hena a wokae no,
na onipa ba nso ne hena a wʼani ku ne ho?
5Wobɔɔ no ma ɔyɛɛ akumaa kakra sen abɔfo
na wode wʼanuonyam ne nidi abɔ no abotiri.
6Woyɛɛ no ɔsodifo maa wo nsa ano nnwuma
wode nneɛma nyinaa ahyɛ nʼanan ase:
7nguankuw ne anantwikuw nyinaa
ne wuram mmoa nso,
ne po mu mpataa,
nea ɛnenam po mu akwan so nyinaa.
9Awurade, yɛn Awurade,
wo din yɛ kɛse wɔ asase nyinaa so!
AKCB : Nnwom 8